Tinye uche na API iji too ngwa gị (Del.icio.us na Technorati) | Martech Zone
Friday, April 20, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Site na oge ị gụrụ nke a, enwere ike idozi ya… mana ị nwere ike chọpụta na nke m Teknụzụ Ọkwa bụ 0. Nke ahụ bụ n'ihi na Technorati API na-adịghị alọghachi n'usoro dị ka akụkụ nke oku na-aga (ọ na-alọghachi a mechiri emechi ọnụ ).
Nakwa, Del.icio.us' API na-eme ihe. Ha doziri esemokwu ebe a na-agaghị eweghachite posts ụbọchị ọzọ mgbe ị rịọrọ maka otu mkpado. Taa, ọ na-alọghachi ndekọ mbụ n'ime mkpado ahụ. Akpaghị aka ọrụ na posts m Daily agụ dịghị posted ma.
Enweela m ụlọ ọrụ abụọ ahụ arịrịọ mana anaghị m azaghachi ọ bụla. Ha abughi nnukwu ụlọ ọrụ bịarutere m n'ezie mgbe m chọrọ enyemaka n'oge gara aga ma enwere m olileanya na ha na-eme ugbu a. O nwere ike ọ gaghị abụ ihe gbasara ụlọ ọrụ abụọ a, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emeso ha API dị ka akụkụ nke abụọ nke ọrụ ha ma ọ bụ ngwa ha.
Nke ahụ bụ mmejọ nke nwere ike igbu azụmahịa gị n'ọdịnihu dị nso. Anyị na-eme ngwangwa gaa na 'semantic' web… na plugins, wijetị, rss, omenala peeji, wdg ebe API ga-adị mkpa karịa Ntanetị Ndị Ọrụ n'onwe ha. Na a Gwakọọ ngwa, Enwere m ike ịkpọtụrụ onye nkesa nke na-ekwukwa ọtụtụ API. Ọ bụrụ na m bụ ụlọ ọrụ Mashup, agaghị m eme azụmaahịa na-anaghị ewere nke ha API kpọrọ ihe.
IMHO, nke a bụ ihe mmụta na Google mụtara nnọọ n'oge. Ọ bụrụ na ị jiri nlezianya na-edebe Google, ngwa ọ bụla ha na-eweta n'ahịa nwere API ndị siri ike na-akpọ ọgụgụ isi nke atọ. E nwere ọtụtụ azụmaahịa na ngwa etinyere na API ndị ahụ.
Kama ịnwe nkwado nke atọ, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ebuso ha agha kpamkpam. Statsaholic ga-agbanwe aha ya site na Alexaholic n'ihi nsogbu ahia. Were ya na… onye na - ewuli Interface Onye Ọrụ mara mma nke na - akwalite ọnụ ọgụgụ ị mepụtara. Ha ekesaala ọnụọgụ ndị ahụ ọtụtụ narị puku ndị ọrụ (ikekwe nde) ndị ọrụ. Iru eru nke a na-enwetụbeghị ma ọ bụrụ na ị gbalịrị ịme ya n'onwe gị… na iwe were ha.
Izu a na Indianapolis Book Club, anyị tụlere Starfish na Spider: Ike a na-apụghị igbochi nke nzukọ ndị na-enweghị isi. Isi ihe dị n’akwụkwọ a bụ na Ududo nọchiri anya nzukọ dị n’elu. Gbuo isi ahụ nwere ike ịlanarị. Bee Starfish ma ikuku puta na 2 Starfish.
Nchọta Google nọ na-ewere òkè ahịa na Technorati. Ahụrụ m Technorati n'anya ma ka na-eche na ọ dị mfe karị ịrụ ọrụ, mana enweghị esemokwu na Google bụ nnukwu ụgbọala na enyo azụ. Izu a ka Google weputara ya API Nri Ajax… Nke a bụ mmebi iwu ọzọ na Teknụzụ ma ha matara ya ma ọ bụ na ha amataghị. (Ọ na-asọ mpi na Yahoo! Ọkpọkọ.)
Aghọtaghị m ụjọ ụlọ ọrụ na-emeghe API ha ma hụ na arụmọrụ siri ike na nkwado nke ha maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na nke ọzọ, ịmalite n'ihu na. Enwere uru dị iche iche… pere mpe na njikarịcha njirimara, obere ahụhụ, obere nkwado, obere bandwit (otu API oku na-aga bụ obere data karịa peeji) na azụmaahịa ndị dabere na azụmaahịa gị. Ndị a abụghị ndị ịchọrọ ịsọ mpi ma ọ bụ wezuga, ndị a bụ ndị ịchọrọ ịmakụ ma kwụọ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị na-ese ihe ngwa weebụ gị dị ka osisi, ịnwere ike iche maka UI gị dị ka akwụkwọ gị na API dị ka mgbọrọgwụ gị. Epupụta dị mkpa ma maa mma, mana ịnwe mgbọrọgwụ miri emi ga-eme ka azụmaahịa gị 'n'ọdịnihu.
Ian Kallen kwuru
N'eziokwu, idebe arụmọrụ anyị n'azụ na-aga were were meziwanye webụsaịtị bute ụzọ, mana atụla ụjọ, ndị ọrụ API anyị na- dị anyị mkpa. Obi ụtọ ịhụ gị wijetị na-egosipụta na ọkwa ọzọ, Echere m na na validates na ndozi mere ka API wee mmetụta 🙂
Daalụ, Ian! Amaara m na ị na-eche na ndị ọrụ niile dị mkpa - enwebeghị m ahụmịhe dị iche na Technorati. Beingbụ onye njikwa ngwaahịa na onye na-eweta ọrụ Email anyị na-alụ ọgụ na API anyị n'otu ụzọ ahụ.
Osimiri ahụ yiri ka ọ na-atụgharị agbanyeghị! Companylọ ọrụ m mechara mata uru nke API sitere na uru ROI. Unu ndị mmadụ na-agbanye ohere ọhụụ ọhụụ - anyị ga-aga n'ihu na-akwalite ọrụ gị!